Kirasi yekuita mhosva pamusoro pe iPhone 6 skrini dambudziko rinowana simba | IPhone nhau
Nguva pfupi yapfuura iyo iPhone 6 Yakaisirwa kutengeswa uye yakawanikwa ichikotama neimwe 'nyore', zvichikonzera iyo yakakurumbira Bendgate. Mwedzi yapfuura, atove makore maviri mushure mekutanga kwayo, dambudziko rakawanikwa zvakare izvo zvakakonzera kuti skrini iratidze Dambudziko rakonzera kuti panhivi yekubata irege kushanda pamusoro pepaneru, panowonekwa mutsetse we grey, uyo unonzi Touch Disease (tactile chirwere).
Pakutanga, kwaive nevashandisi vatatu vakanyunyuta nezve dambudziko iri uye vakamhan'arira Apple, vachiti kambani inotungamirwa naTim Cook yakaramba kugadzirisa iyo iPhone 6 yakabatwa nedambudziko iri mahara, asi Motherboard anovimbisa that the nhamba yevanokanganisa vashandisi iri kuwedzera. Vashandisi vatatu vekutanga vakaisa mhosva yavo muCalifornia uye ikozvino mumwe akaiswa muUtah.
Apple inotarisana nemakirasi maviri ekuitisa mhosva pamusoro pe iPhone 6 Kubata Denda
Dambudziko rinozivikanwa se Bata Zvirwere Inoonekwa zvakanyanya pane iyo iPhone 6 Plus, kunyangwe iyo 4.7-inch modhi isiri immune kune iyo. Iko kukanganisa kuri mune madhiraivha eiyo «kubata IC» mabhodhi, saka kuchinja skrini yeiyo yakanganisa iPhone kwaisazove mhinduro. Nekuti mabhodhi emama haana kugadzirirwa, mhinduro chete Apple inofanira kupa izvozvi ndeye… tenga chishandiso chitsva.
Kuti ive chaiyo, Apple inobvunza $ 329 yekuchinja iyo iPhone 6 nedambudziko iri kune imwe yakagadziriswazve. Dambudziko nderekuti Kubata Chirwere kuripo nekuda kwekutadza kwehardware uye chero iPhone 6 kana iPhone 6 Plus inogona kukanganiswa nayo chero nguva.
Apple haisati yasimbisa pachena kuti inoziva nezve Kubata Chirwere, asi Motherboard inotaura kuti angangoita mashanu Apple Genius kubva kuApple akatsigira izvozvo kambani inoziva nezvekuvapo kwayo, asi ivo havazotauri vatengi.
Pasina kupokana, dambudziko iri rakati reuchidzei reGlass Note 7 mupfungwa yekuti iyo iPhone 6 ine dambudziko risingagadzirisike redhirairi. Musiyano ndewekuti Kubata Zvirwere inowanzoonekwa mushure menguva refu yekushandisa uye, hongu, haina ngozi kune vashandisi. Chero zvazvingaitika, ini ndinofunga Apple inofanirwa kupa mhinduro iri nani pane kuraira kuti utenge imwe iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6 » Iyo kirasi yekuita mhosva pamusoro peiyo iPhone 6 skrini dambudziko rinounganidza kukurumidza
Zvirinani vanofanirwa kupa imwe nyowani, ngatiendei nekuti yangu iPhone 6 painomira kushanda uye pamusoro peiyo ndinofanira kubhadhara 339 euros, iyo pamusoro pebhajeti rangu rose isiri yekushandisa ...
Pamusoro peizvozvo, ane nyadzi diki dzekuti utenge iwe nyowani imwe hahahahaha ...
Chakavanzika icho akadaro
Ini ndaive nedambudziko iri 4 mwedzi yadarika, ndiri pasi pewarandi ndinotenda Mwari vakachinjira ini. Saka, kana zvikaitika kwatiri tisina kupihwa garandi uye ndichifanira kuribhadhara, ndinozviona sembavha.
Isa zvinhu zvese zvaunazvo pane iyo iPhone 6 izvo zvinonyadzisa
Vakachichinjira kwandiri pasina dambudziko, ini ndichine mwedzi mitatu yewarandi uye iyo terminal ine 21 mwedzi, muMálaga la Cañada
Ndine dambudziko randinofunga ... Nguva nenguva sikirini yangu inogara yakagwamba, ndiko kuti, ndiri muchikumbiro, uye kamwe kamwe iyo yekubata system haishande ... ndaifunga kuti ichagadziriswa neIOS 10 asi zvimwe zve zvimwe chete ...
Yangu i iPhone 6 Plus asi patova nemwedzi miviri kubva gore rewarandi rapera ...
james lester akadaro
Ndakanga ndine rombo rakanaka, ndakanga ndasara nemazuva mapfumbamwe kuti ndipedze garandi,
Pindura kuna james lester
Chinhu chimwe chete ichi chakaitika kwandiri, nerombo rakanaka ndakanga ndasara nemwedzi mishanu yewarandi uye ini ndichine kusvika munaNdira
Vakandipa nyowani ndizvozvo
Asi ini ndinovimba hazvingazoitikazve mumwedzi makumi maviri ... ndinovimba iyo mvumo mitsva ye iPhone yagadzirisa
Sezvo ini ndichitsvaga iyo serial nhamba uye inogadzirwa munaJune 20, 2016
Ndakaitumira kugadzirisa iro dambudziko uye ndemamwe matinji ekubata ayo akaipa nekuti iyo yekubata id haichashandi
Izvi zvakaitikawo kwandiri. Vakachinja mwedzi wapfuura (iphone 6 plus) asi ndinotya chaizvo kuti munguva ichaitika kwandiri zvakare (zvinova ndizvo zvichaitika). Apple inofanira kupa mhinduro chaiyo kwatiri tese isu takashandisa mari yedu (kwete zvishoma) pane chigadzirwa cheAPLELE.
Ndakanga ndichine garandi?
Samsung inomisa kugadzirwa kweGalaxy Note 7
Mifananidzo yekutanga yeHTC smartwatch yakasvinwa